‘सिमसार जैविक विविधताको घर हो’
अन्तर्वार्ता/विचारशुक्रवार, माघ १९, २०७४
नेपालका सिमसारहरू नासिंदै गएको बारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको वनस्पति विज्ञान विभागका प्राध्यापक रामप्रसाद चौधरी भन्छन्, “संरक्षणका कुरा एक दिन गरेर हुँदैन ।”
सिमसार के हो र नेपालका सिमसारहरुको अवस्था कस्तो छ ?
पानी भएको दलदले, धापिलो वा ओसिलो ठाउँ सिमसार हो । सिमसारको परिभाषाभित्र ताल–तलैया, नदी किनार र धानखेत समेत पर्दछन् । डेढ दशकअघिको अध्ययन अनुसार नेपालमा साना ठूला गरी तीन हजार ९०० सिमसार क्षेत्र छन् । त्यसमध्ये १० वटा सिमसार विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका छन् ।
सिमसार मासिनुको खास–खास कारण के–के हुन् ?
मुख्यतः मानवीय अतिक्रमण नै हो । सिमसार क्षेत्र पुरेर घरघडेरी बनाउने काम गरियो । संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगितालाई एकीकृत रुपमा अघि बढाए मात्रै सिमसारको अस्तित्व बचाउन सकिन्छ । सिमसार संरक्षणका लागि सरकार, गैर–सरकारी संघ–संस्था, विज्ञसमूह र स्थानीय समुदायको एकीकृत प्रयास अत्यावश्यक छ ।
सिमसार किन संरक्षण गर्नुपर्छ ?
मानव सभ्यताको विकास नै पानीबाट भएको हो । अर्कोतर्फ, सिमसार जैविक विविधताको घर हो, जहाँ चराचुरुङ्गीदेखि विभिन्न प्रजातिका जलचरको बासस्थान हुन्छ । सिमसार नासिंदा जैविक विविधताको घर पनि नष्ट हुन्छ र वातावरणमा खलल पुग्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर मानव जीवनमा पर्दछ । सिमसार सुरक्षाबाट वातावरण संरक्षण मात्र नभई आर्थिक फाइदा पनि लिन सकिन्छ । अहिले विश्वभर पर्या–पर्यटनको विकास भएको छ ।
सिमसारको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ ?
विश्व सिमसार दिवसको अवसरमा एक दिन संरक्षणका कुरा गरेर पुग्दैन । हामीले ३६५ दिन नै सिमसारको संरक्षण गर्ने योजना बनाएर लाग्नुपर्दछ । सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्दछ । धेरै मानिसलाई अहिले पनि सिमसारको महत्व थाहा छैन । उनीहरूलाई बुझाउने कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।
सिमसार क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिले सिमसारलाई राजश्व संकलनको माध्यम मात्र बनाए, संरक्षणमा ध्यान दिएनन् । अब स्थानीय तहहरुले उपयोगितासँगै संरक्षणमा जोड दिनुपर्दछ । केही ठाउँका सामुदायिक वनहरूले संरक्षण र उपयोगितालाई सँगसँगै लगेर राम्रो काम गरेका छन् ।